FAQ | Iingoma ze-Songz zeMoto eziMelana noMoya Co., Ltd.
1. Ngaphandle kweemveliso ezidweliswe kwiwebhusayithi, ngaba zikhona ezinye iimveliso zomoya ezifumaneka kwi-SONGZ?
Ewe, sineemveliso ezifumanekayo zomoya we-truck air kunye nendawo yokupaka yombane epholileyo, nceda unxibelelane sales@shsongz.com ngeenkcukacha ezithe kratya.
2. Iqale nini i-SONGZ i-R & D yomoya wombane webhasi yombane?
Saqala i-R & D ngaphambi ko-2009, kwaye ngo-2010 unyaka wokuqala sanikezela ngeeyunithi ezingama-3250 kwintengiso. Emva koko, inani lokuthengisa likhula unyaka nonyaka kwaye libetha ngaphezulu kwe-28737 ngo-2019.
3. Yintoni imathiriyeli ye-SMC?
I-SMC (i-Sheet Mounding Compound) izinto ezidityanisiweyo zibunjwe bubushushu obuphezulu ngexesha elinye, kunye namandla oomatshini aphezulu, izinto ezinobunzima bokukhanya, ukumelana nokubola, ubomi obude benkonzo, amandla aphezulu okugquma, ukumelana ne-arc, ukuvutha kwelangatye, ukusebenza ngokutywina okuhle, kunye nemveliso eguqukayo uyilo, kulula ukulinganisa imveliso, Kwaye inezibonelelo zokhuselo kunye nobuhle, ngayo yonke imisebenzi yemozulu yokukhusela, enokuhlangabezana neemfuno zobume obahlukeneyo kunye neendawo kwiiprojekthi zobunjineli zangaphandle.
I-SONGZ yamkela imathiriyeli ye-SMC kwisembozo se-air conditioner kwi-SZR kunye ne-SZQ series, ukuthatha indawo yeglasi yeglasi.
Thelekisa phakathi kweSMC kunye neFibre yeglasi Cover
Uhlobo lwenkqubo Inkqubo yokwenza izinto ezidibeneyo ikakhulu ngokusebenza ngesandla phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo. Inkqubo ilula, ukusebenza kulula, akukho zixhobo zobungcali ziyafuneka, kodwa umgangatho wamalungu kunzima ukuwuqinisekisa Ukuncitshiswa kombumba kukusebenza kokubeka i-SMC enjengokubumba iphepha elinjengembumbulu kwindawo yokubumba kwiqondo elithile lobushushu, kwaye emva koko uvale ukungunda ukucofa kunye nokubumba kunye nokuqinisa. Ucinezelo yokubumba enokusetyenziselwa iiplastikhi thermosetting kunye thermoplastics.
Ukuthambisa umphezulu wemveliso I-Smooth kwelinye icala, kwaye umgangatho uxhomekeke kwinqanaba lomsebenzi Smooth kumacala omabini, umgangatho olungileyo
Ukuguqulwa kwemveliso Imveliso inexabiso elikhulu lokumila kwaye akukho lula ukuyilawula. Ichaphazeleka kakhulu bubushushu kunye nokusebenza ngesandla Ukukhubazeka kwemveliso kuncinci, kwaye ubudlelwane obuncinci kunye neqondo lobushushu kunye nenqanaba labasebenzi
Ibhola Ngenxa yenkqubo yokubumba, ukutyeba kugqitywe linani lemiqolo elaminethiweyo, iileya akukho lula ukungena kuzo, amaqamza akukho lula ukuwasusa, kwaye amaqamza kulula ukuvelisa Ubungakanani bumiselwe yimali yokondla kunye nokuvunda. Ngenxa yobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu ekubunjweni, akukho lula ukuvelisa amaqamza
Ukuqhekeka 1. Ngenxa yesixa esikhulu semveliso deformation, akukho lula ukuyilawula, kwaye akukho lula ukuyifaka ngexesha lofakelo.2. Ubushushu obuphantsi bunyanga imveliso ecothayo, okukhokelela kuqhekeko oluncinci kumphezulu wemveliso
3. Ngenxa yokuqina okuncinci kwemveliso, i-elasticity inkulu kunaleyo yokubumba, kwaye ipeyinti yomphezulu ithambekele kwimigca emihle yemveliso.
Imveliso izinzile, ngaphandle kokuba amandla endawo angonelanga, uxinzelelo loxinzelelo lukhokelela ekuqhekekeni
Iziphumo Utyalo-mali lokuqala luphantsi, imveliso iphantsi, kwaye ayifanelekanga kwiibhetshi. Imveliso ichaphazeleka kakhulu linani labasebenzi kunye nenani lomngundo (iziqwenga ezi-3-4 / ukungunda / iiyure eziyi-8) Utyalo-mali olukhulu lokuqala, olulungele ukuveliswa kobunzima (iziqwenga eziyi-180-200 / ukungunda / iiyure ezingama-24)
4. Yintoni imathiriyeli ye-LFT?
I-LFT ikwabizwa ngokuba yi-fiber-reinforced thermoplastic okanye isiko elibizwa ngokuba yi-fiber-reinforced thermoplastic composite material, ebunjwe yi-PP kunye nefayibha kunye nezongezo. Ukusetyenziswa kwezongezo ezahlukeneyo kunokutshintsha kwaye kuchaphazele ukwenziwa kwemveliso kunye neempawu ezizodwa zesicelo semveliso. Ubude befayibha ngokubanzi bukhulu kune-2mm. Itekhnoloji yokuqhubekeka yangoku sele ingagcina ubude befayibha kwi-LFT ngaphezulu kwe-5mm. Sebenzisa iifayibha ezahlukeneyo zentlaka ezahlukeneyo kunokufumana iziphumo ezingcono. Kuxhomekeke ekusetyenzisweni kokugqibela, imveliso egqityiweyo inokuba nde okanye imile emicu, ububanzi bepleyiti, okanye ibar, esetyenziselwa ngokuthe ngqo ukubuyisela iimveliso ze-thermoset.
5.Izibonelelo ze-LFT ngokuthelekiswa nefayibha emfutshane yokuqiniswa kwe-thermoplastic composites
Ubude befayibha obude buphucula kakhulu iipropathi zoomatshini zemveliso.
Ukuqina okuphezulu okuphezulu kunye namandla athile, ukumelana nefuthe elifanelekileyo, ngakumbi kufanelekile ekusetyenzisweni kweenxalenye zemoto.
Ukuxhathisa okunqabileyo kuphuculwe. Ukuzinza komlinganiso kulungile. Nokuchaneka bokwakha iindawo iphezulu.
Inokuzinza okungcono kubushushu obuphezulu nakwimeko yokufuma.
Ngexesha lenkqubo yokubumba, imicu inokuhamba ngokuthe ngcembe ekubumbeni, kwaye umonakalo wefayibha mncinci.
Izinto ze-LFT zamkelwe kwindawo yomoya webhasi ye-SZR uthotho, uthotho lwe-SZQ, kunye nohlobo lomzimba omxinwa woluhlu lwe-SZG.
I-LFT engezantsi kweShell ye-SZG (Umzimba omxinwa)